अन्तरजातिय विवाह गरेका निहुँमा : अजित मिजारलाई झुण्डाएर हत्या « जागरण मिडिया सेन्टर
Home » अन्य » अन्तरजातिय विवाह गरेका निहुँमा : अजित मिजारलाई झुण्डाएर हत्या
अन्तरजातिय विवाह गरेका निहुँमा : अजित मिजारलाई झुण्डाएर हत्या
२०७३ साउन ३,जागर मिडिया सेन्टर ।
आफूलाई मन परेको केटा र केटी मिलेर बिबाह गर्ने धेरै जोडीका सुखी र खुसी जीवन जीउने सपना साँचेका हुन्छन् । अझ जुनी जुनी संगै जीउने संगै मर्ने कसम खाएका हुन्छन । तर यसरी जुनी जुनी संगै बाँच्ने कसम खाएका एक यूवालाई विवाह गरेको एकसाता नवित्दै प्रेमीका संग छुटाएर हत्या गरीएको छ ।
घटना हो काभ्रे पाँचखाल नगरपालीका ६, होक्सेको । स्थानीय सर्वमंगल उच्च माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा १२ मा अध्ययनरत अजित मिजारले गएको असार २५ गते संगै पढ्ने पराजुली थरकी यूवतिसंग प्रेम बिबाह गरेका थिए । बिबाहको पर्सिपल्ट यूवतिले आफनो परीवारलाई फोन गरेर आफूले बिबाह गरीसकेको जानकारी गराईन् । तर त्यही जानकारी नै उनको बिछोड बन्न पुग्यो । आफूले माया गरेको मान्छेसंग प्रेम विछोड त भयो नै, उसको जीवन समेत सधैका लागि समाप्त भयो ।
‘२५ गते उनीहरु भागेपछि २७ गते केटीले नै घरमा आत्तिए होलान भनेर मैले यस्तो व्यक्तिसंग बिबाह गरे भनेर भनिछन्’ दलित महिला संघ काभ्रेकी अध्यक्ष मैया रोक्काले भनिन् ‘त्यसपछि प्रहरीमा उजुरी गरेर उमेर नपुगेको भन्दै सम्बन्ध छुटाउनेदेखि हत्या गर्नेसम्मको घटना भयो ।’
फोनमा केटीपक्षको लास गायव पार्ने धम्की
पराजुली परीवारले प्रहरीमा उजुरी गरेपछि २७ गते नै प्रहरीले उनीहरुलाई पक्राउ गरी उमेर नपुगेको कारण देखाएर मिलापत्र कागजका आधारमा २८ गते सम्बन्ध विच्छेद गरायो । २९ गते पराजुलीले मिजारलाई फोन गरेर आफूलाई थुनेर राखेको र भागेर आउने भन्दै नआत्तिन जानकारी गराईन । त्यसको केहीबेरमै धम्की दिने र अपहरण गरी हत्या गरेको आरोप उनका आफन्तले लगाएका छन् । ‘प्रहरीबाट फर्केको भोलिपल्ट केटीले फोन गरेर मलाई थुनेर राखेका छन्, भाग्न पाएँभने घरमै आउँछु नआत्तिनुस भनेर फोन गरीन’ एक आफन्तले भने ‘तर केहीबेर पछि फेरी अर्को फोन आयो, तैले अझै फोन गर्न छाडेको छैनस ? फोन गर्न छाडेनस भने तँलाई मारेर लास गायव पारीदिन्छु भनेर ।’
आशामा बसेका अजित एकाएक गायव
धम्की आएपनि आफ्नी प्रेमिका आउने आशामा उनी खुसी नै भएर बसेको परीवारको भनाई छ । छोरा खुसी भएर बसेको देखेपछि परीवारका अरु सदस्य बारीमा गए । तर फर्केर आउँदा छोरा थिएन । मोवाईल पनि घरमै छाडेकोले एकैछिन साथीकोमा गएको होला भनेर पर्खे तर साँझसम्म नपर्खेपछि भने खोजबिन शुरु गरे । ‘साथीकोमा दुःख सुखका कुरा गर्न गएको होला भनेर दिनभरी खोजीएन रातीसम्म नआएपछि खोज्दा कतै भेटिएन’ ति आफन्तले भने ।
डरले प्रहरीकहाँ पुगेन परिवार
दलित महिला संघकी अध्यक्ष मैया रोकाका अनुसार केटीपक्षको डरका कारण उनीहरु प्रहरीकहाँ पनि समयमै जान सकेनन् । ‘वरीपरी छिमेरी र आफन्तकहाँ खोज्नुभएछ तर प्रहरी र हामीलाई डरले जानकारी सम्म दिनुभएन’ उनले भनिन् ‘हिँजोमात्र मैले थाहा पाएर प्रहरीमा उजुरी दिनुस भनेपनि हिँजो बिदा भएकोले आज जानकारी गराउँदा मृत्यू भैसकेको खवर आयो ।’
बिहान प्रहरीमा उजुरी गराएपछि कतै गएको छोरा आउला भन्ने आश बुवालाई थियो तर प्रहरीकहाँ पुगेर सबै कुरा जानकारी गराउन नपाउँदै उनको छोरा जस्तै हुलिया भएको यूवक धादिङ्गको गजुरीमा मृत्यू भएको जानकारी भएपछि भने उनले पत्याउनै सकेनन । त्यसपछि आफन्तलाई खवर गरेर गजुरी पुगेका उनलाई त्यतिबेला सम्म आफ्नो छोरा मरेको जस्तो लागेको थिएन, जतिबेला सम्म उनले गाडीसकेको लास निकालेर आफ्नै छोराको लास देखेनन् ।
परीवारलाई थाहै नदिई गाडीयो लास
ईलाका प्रहरी कार्यालयले भने परीवारलाई जानकारी समेत नदिई लास गाडेको छ । परीवार र आफन्तजनले पोष्टमार्टम समेत नगरेको आरोप लगाएका छन् । तीनचारदिन अगाडी गजुरीबाट धादिङ्गबेसी जाने हाईवेमा फुर्केखोला पुलपारी एउटा काठको पाटीमा लास भेटिएको र तीनचारदिन सम्म पहिचान हुन नसकेपछि लास गाडीएको प्रहरीले बताएको छ । ‘तीनचारदिन अगाडी लास भेटिएको भनेर हामीलाई जानकारी आयो अनि हेर्दा झुण्डिएर हत्या गरेको रहेछ’ ईलाका प्रहरी कायाृलय गजुरीका ईन्चार्ज प्रकाश जवेगुले भने ‘हामीले सामाजिक सञ्जालमा र सबै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जानकारी गरायौँ तर कहिँ कतैबाट सोधखोज नभएपछि स्थानीयले लास गन्हायो भनेर प्रहरीको टाउको खाएपछि हामीले उहाँहरुकै रोहवरमा लास गाड्यौँ ।’
दवावमा आत्महत्या गरेको देखियो : ईन्स्पेक्टर जगेवु
३० गते साँझ धादिङ्गबेसी जाने हाईवेमा काठको टाँडमा एकजना मान्छे झुण्डिएर मरेको भन्ने थाहा भयो । त्यो पार्टी पौवा जस्तो छ । माथी तलामाथी चढेर केटाकेटी बस्ने ठाउँ रहेछ । माथी चढ्न पनि अप्ठ्यारो । त्यहाँ आएर नजिकै रोस्लान भोड्का, २ वटा वियर, कुरकुरे लेज छ, । १ जोर जुत्ता छ ।
अनि हुलिया हेरेरसामाजिक सञ्जाल र सबै जिप्रकामा परीपत्र जानकारी गराएपछि पोष्टमार्टमका लागि लग्यौँ । गजुरी अस्पत्तालमा राखिएको लास ३ दिनसम्म कोहीपनि लिन नआएपछि वरीपरी रहेका स्थानीयले लास गन्हायो भनेर निवेदन आयो । उनीहरुको रोहवरमा सद्गद गरीयो । आज फेरी काभ्रेबाट मान्छे आएपछि कुरा बुझ्दा धम्क्याएको कारणले आत्महत्या गर्न बाध्य बनाईएको देखियो । उहाँहरुले हत्या हो भन्ने खालका कुरा गर्नुभयो तर हामीले त जे देखेको हो त्यो ग¥यौँ । केही चेटपटक, घाउ, दाग थिएन । स्थानीयले गन्हायो भनेर पुलिसको टाउको खाएपछि हामीले उहाँहरुकै रोहवरमा गाड्यौँ । पुलिसलाई भन्दा पनि पोष्टमार्टम गर्ने मान्छेलाई नै थाहा होला त्यहाँ त । पोष्टमार्टम त हामीले गर्ने होईन । भित्र चिरेर हामीले हेर्ने होईन । डाक्टरले गर्ने हो । कानुनी प्रकृृया पु¥याएको हो ।
प्रहरीको जानकारी नै शंकास्पद
अजित २९ गतेमात्रै घरबाट हराएका थिए । प्रहरीले तीनचार दिन सम्म लास राख्दा गन्हाएको बतायो । तर प्रहरीले दिएको जानकारी अनुसार नै लास गाडेको दिन साउन एक गतेसम्म दुईदिन मात्र पुग्छ । ‘२ दिनमै झुण्डिएको लास गन्हाउँछ त ?’ अधिकारकर्मी विष्णु खत्रीले भने ‘यो कुरा ने संकास्पद लाग्यो ।’
तर ईन्स्पेक्टर जगेवुले भने गजुरीमा गर्मि भएको र चिसोमा राख्ने व्यवस्था नभएको कारण स्थानीयले गन्हाएको गुनासो गरेको बताए । ‘यहाँ गजुरी अस्पत्तालमा लास घरमा चिसोमा राख्ने व्यवस्था छैन’ उनले भने ‘त्यसैले स्थानीयले गन्हाएर बस्न नसकिएको गुनासो गरे ।’
पोष्टमार्टम नै गरीएको छैन : आफन्त, हामीसंग रिपोर्ट छ , प्रहरी
आईतबार गजुरी पुगेका मृतकका आफन्तले गाडीएको लास निकालेर काठमाण्डौ ल्याएका छन् । पोष्टमार्टम नगरेको भन्ने आफन्तको आरोप पछि प्रहरीले गाडीसकेको शव निकालेर आफन्तको जिम्मा लगाएको ईन्स्पेक्टर जगेवुले बताए । ‘सद्गत गरीसकेको लास उत्खनन गरेर दिन त नमिल्ने हो । तर उहाँहरुको पिडा देखेर निकालेर दियौँ ’ उनले भने ।
सरकारलाई जानकारी गराउँछौ : दलित आयोग
अन्तरजातिय विबाहसंग जोडिएर भएको यो घटना गम्भिर प्रकारको घटना भएको भन्दै राष्ट्रिय दलित आयोग पनि घटना खोतल्न लागेको छ । त्यसैले घटनाको बारेमा छानविनका लागि सरकारलाई सिफारीस गर्ने राष्ट्रिय दलित आयोगका सदस्य सचिव सिताराम घले परियारले बताए । उनले प्रहरीले पोष्टमार्टम गरीसकेको भनेपनि शव निकालेर हेर्दा पोष्टमार्टम गरेको नदेखिएको समेत बताए । ‘शव निकालेर हेर्दा पोर्टमार्टम गरेको देखिएन, त्यसैले पुन पोष्टमार्टम गरीसकेपछि धेरै कुरा थाहा होला ’ उनले भने ‘घटना गम्भिर भएकोले पहिला उनीहरुलाई थुन्ने अनि उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेर छानविन होस भनेर भोली प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरीषदको कार्यालयलाई सिफारीस गर्दै छौँ ।’
– See more at: http://dalitonline.com/archives/13149#sthash.nCltiz57.dpuf
By जागरण मिडिया सेन्टर in अन्य, दलित समाचार, समाचार on July 18, 2016 .
← बैतडी प्रकरण : छुवाछूत गर्ने डाक्टरमाथि मुद्दा दर्ता , डाक्टर अवस्थी फरार	विवाह गर्ने निहुँमा दलित युवतीको विचल्ली →